Mmụọ nsọ site lowercase King — njem Lee - Official Site
Taa anyị na-agba ndị nketa nke ndị na-ebute ndú nke Civil Rights ije, Dr. Martin Luther King Obere. Jehova na-eji nwoke a kpalie mba, na-akpali a ndị mmadụ kwupụta hara nhata. A ka nwere ọrụ anyị ga-arụ, ma ya onyinye ezigbo aka. Abụghị dike zuru okè, na Dr. Eze bụ sokwa, ma m na-enwe mmasị ya ọtụtụ ihe, m na-n'ike mmụọ nsọ ya ketara. Ebe a nwere ihe atọ banyere ndụ ya na-akpali m.
1. Ahuhu maka Justice
Dr. Eze-arụ na-ezighị ezi na ọtụtụ n'ime anyị na ụwa, na rara ndụ ya nye ebuso ya agha. Na Bible, ọ hụrụ Chineke ọhụụ maka ya n'ụwa, Ọ hụrụ ndị amụma na-akpọ maka njedebe nke mmegbu, na Ọ bụ omiiko aka ịhụ na ikpe ziri ezi emezuwo. M na-enwe mmasị a ahuhu n'ihi na ikpe ziri ezi, na-ekpe ekpere Chineke ga-anọgide na-arụ ọrụ ya nke m obi. Achọrọ m ọgụ ka na-emegbu emegbu ma na-ekwusa Ozi Ọma ka olileanya na-adịghị.
N'agbanyeghị youthfulness, Dr. Eze amụma okwu na kristal doro anya ọhụụ ada enye iputa dị ka onye ndú nke ije. Ọ na-anọdụ ala azụ na mkpesa, ọ steepụ ma duru. Ọ bụ doo anya na ihe o chere ga-enyere nwa ndị mmadụ ịga n'ihu, ọ we duru ndị ọzọ na direction. Nke a rụpụtara na-abụghị ime ihe ike iguzogide nke nyeere ịgbanwe United States ruo mgbe ebighị ebi. Anyị nile pụrụ ịmụta site na nke a ụdị onye ndu. Vision bụ naanị ihe bara uru mgbe ọ na-lụrụ onye ndu. Idu ndú ya nyeere ọhụụ emezuwo.
3. obi ike
N'ezie, ya ọgụ ahụ zutere ọnụ ọchị na-eruru. Ọ okowụt ndụ ya mgbe ọ bụla ọ zọrọ ije, kwuru, ma ọ bụ mkpesa. Ọ maara ihe ọ na-eme dị ize ndụ, ma o nwere obi ike na-etinye ndụ ya na akara maka ndị ya. The mmegide ndị o nwere adịghị ígwé ojii ya ọhụụ, ma ọ bụ daa mbà idu ndú ya. Ọ bụ naanị chetaara ya ihe mere e ji na-alụ ọgụ. Ana m ekpe ekpere ka Jehova ga-arụ ọrụ na m na-unshakeable obi ike na-anọchi anya alaeze Ya na-akpata ịlụ ọgụ n'ihi ebube-.
M na-atụ na ị na-sitere n'ike mmụọ nsọ ihe nlereanya ya dị ka nke ọma, na m nwere olileanya na ị ga-esonyere m na-eto Chineke maka ihe O lutara site Dr. King.
Pstan26 • August 19, 2013 na 8:28 Abụ • zaghachi
for the love of Nigeria • August 19, 2013 na 8:29 Abụ • zaghachi
Tamiehicks • August 19, 2013 na 8:30 Abụ • zaghachi
Dan Smith • August 19, 2013 na 8:30 Abụ • zaghachi